Ogaden News Agency (ONA) – Ujeedada Maskax-maydhkii Lagu Sameeyey Dhalinyarada Ogadenya iyo Ruwanada – Noora Afgaab
Ujeedada Maskax-maydhkii Lagu Sameeyey Dhalinyarada Ogadenya iyo Ruwanada – Noora Afgaab
Weli waxaan ku dhex jirnaa marxaladii 1aad ee dacaayadda TPLF/Itobiya oon ku astaamaynay –Marxaladii Mayd Xambaarka iyo Laynta Shacabka-. Waxaa laga yaabaa akhristayaasha qaarkood inay layaabaan maqaalada aan kaga hadlayno dacaayadaha gumaysiga inaan soo dhexgalino dhibaatada uu ku hayo shacabka. Waxayna u fahamsan yihiin inay Dacaayaddu tahay Waxaadan ahayn ood sheegato iyo Darafka kaasoo horjeeda oo wuxuusan ahayn aad ku shaabadayso. Taasi waa qayb ka mid ah Dacaayadda, waana qaybta ugu sahlan uguna dhib yar oo lawada yaqaano. Qaybta ugu dhibaatada badan dacaayadaha ay adeegsadaan gumaysiga ama xukuumadaha macangaga kali-taliska ah, waa dacaayadda loo yaqaano –Tusaale Bixinta-, oo ah midda aan ka hadlayno. Waxaa ka mid ah dacaayadda noocaa ah in qof ama dad badan inta lasoo taago meel fagaara ah lagu eedeeyo waxaan jirin, ka dibna si dagdag ah loogu fuliyo ciqaab toogasho ama daldalaad ah, taasoo looga dan leeyahay inta soo hadha inay ka dhaadhacdo in sidaa loo galayo hadaanay ogolaanin waxa laga doonayo. Itobiya waa dawlad gumaysi iyo macangagnimo (Autocratic) isku-darsatay. Saad u fahamto siyaabaha loo fuliyo dacaayadda noocan ah iyo ujeedada laga leeyahay waxaan tusaale ahaan usoo qaadanaynaa ciidankii Faransiiska ee gumaysiga u tagay Algeria iyo xasuuqii Ruwanda ka dhacay 1994kii.
Sarkaal Faransiis ah ayaa ayaa usoo qoray saaxiibkii markay qabsadeen dalka Algeria oo yidhi; Waxaan uga digay askartayda wanaagsan in aan qoriga dabadiisa la dhacayo midkii iila yimaada isagoo wada Carab nool .. sidaa weeye saaxiibow sidaan kula dagaalamayno Carabta: in aan layno ragga wixii ka weyn 15jir laaya, caruurtooda iyo haweenkoodana soo saarno maraakiibta dagaalka oo jasiiradaha Marquesa ama meela kale ku daadino. Hadaan soo koobo, waxaan ku idhi; laaya ragga qofkii ka weyn 15an jir oo cagahanaga hoostooda sidii ayga aan u soo gurguuranin – (.. In one word, annihilate all who will not crawl beneath our feet like dogs.). Ujeedada gumaysiga uu ka leeyahay dacaayaddan tusaalaha lagu bixinayo waa midaa. In shacabka lagu qasbo inay gumaysiga hoos gurguurtaan sidii ayga.
Cabdi Iley waajibaadka lasiiyay midkaa ayuu ahaa. Inuu laayo shacabka say u ogolaadaan inta kasoo hadha inay hoos gurguurtaan gumaysiga. Sidaan ka akhrinayay waraysiyadii ay sii daayeen saraakiishii ka baxsaday Liyu-booliska, Cabdi iley wuxuu kula dardaarmay maleesiyadaa markay dagaalka qaadayeen inay ragga xabbad ku hanuuniyaan, siday ka sheegeen, naagahana (—) kufsi. Hadalkaa Cabdi iley iyo midka uu qoray sarkaalkii Faransiiska ahaa waxba isma doorshaan, faqiga kaliya ee u dhexeeya waa Cabdi iley oo u adeegaya dawlad kale iyo sarkaalka oo u adeegaya dawladiisa.
Si loo fuliyo barnaamijka laynta aabayeel la’aanta ah ee shacabka, waa in marka hore daweynaha loo abuuro Cadaw ay tahay inla tirtiro oo aan loo nixin. Waa marka dacaayadda la adeegsanayo oo loo rogayo xumaan wixii wanaaga u ahaa shacabka. Tusaale isbarbar dhig ah waxaan usoo qaadanaynaa dacaayaddii Huutuuga Ruwanda markay kicinayeen dadka raacsan si loo gumaado kuwa Tutsiga. Si loo kiciyo shacabka Hutu, waxay adeegsadeen dacaayad ah inay Tutsi-ga doonayaan inay qabsadaan dalka oy tirtiraan shacabka Hutu ee dagan Ruwanda. Dacaayadaa ayaa aad loogu shubay dadka Hutuga ah si loogu beero cabsi iyo inuu iska difaaco khatarta kusoo fooleh. Marxaladii labaad waxay ahayd in dadka Tutsiga ah loo ekeysiiyo waxaan ahayn baniiaadam, iyagoo lagu sheegay inay la mid yihiin baraambarada oo lagu laayo baangadda .. (Towards the second purpose, propaganda used imagery aimed at dehumanizing Tutsis, depicting them as cockroaches or “inyenzi” that must be killed). Markii lasoo gaadhay waqtigii loo qorsheeyay in la fuliyo xasuuqa Tutsiga, waxay shacabka Hutuga aaminsanaayeen in aanay jirin wada kaloo u furan inay laayaan Tutsiga mooyaane.
Sidoo kale ayay kooxda TPLF/Itobiya dacaayad ugu kicisay dhalinyarada loo qoray Liyu-booliska, intay tababarka ku jireen iyo markay dagaalada qaadayeenba. Dacaayadda Tusti-ga iyo midda TPLF/Itobiya waxay ku kala duwanaayeen un qaabka loo dhigayo dacaayadda iyo kooxaha lagu kicinayo iyo halka loo jahaynayo. Hadii dacaayaddii Ruwanda ay ku wajahnayd in shacabka Hutu-ga lagu kiciyo say u weeraraan oy u laayaan Tustsi-ga, dacaayadda TPLF ay Ogadenya ka bilaabeen waxaa lagu maskax-rogay dhalinyaro aad u da’yar oo meela kala duwan laga soo ururiyay ka dibna loo fasaxay inay dilaan qofkay doonaan oy laayaan dadweynaha dagan meeshii loo calaamadiyo, iyagoo markay duulaanka qaadayaan tooganaya ama jidh-dilaya qofkii kasoo horbaxa.
Siday ii sheegeen dhalinyara badan oo dhaawac darteed looga fadhiisiyay Liyu-booliska, marka ugu horeysa ee xerada uu soo galo qofka, ayaa lagu bilaabi in la nacsiiyo dhaqankii Somalida iyo diintaba, waxaana laga dhaadhicin inay Itobiya ka sareyso Somalida. Waxaa lagu qasbi intay tababarka ku jiraan inay darduurtaan maandooriyayaal kala duwan (khamri iyo kiniiniyaal darooga ah), iyadoo midkii diida inuu cabo ama liqo kiniiniga uu ka noqonayo xerada tuke cambaar leh oo la adeegsado. Waxaa meesha taala buu yidhi wiil iiga sheekeeyay, saad u muujiso inaad noqotay Itobiyaan waa inaad khamriga uga horeyso amxaarada ku tababaraya. Markaan Khamriga iyo daroogada cabno oo heeso ciidan oo kicin ah naloo qaado ayay qaarkeen inay duulaan qaadaan ooda u jabin jireen. Marka sidaa loo kacsan yahay, qof bani aadam ah oo socda oo la bixinayno ma jirin, ayuu yidhi.
Hadafka dacaayadda TPLF/Itobiya iyo midkii Hutu-ga Ruwanda waxay ka midaysan yihiin in la xasuuqo shacab la astaameeyay oo lagu fulinayo dhalinyaro la maskax rogay oo loo dhiibay hub fiican dhanka Itobiya, ama baangado dhanka Ruwanda. Labada dhanba shacab tira badan ayaa lagu laayay oo aan waxba galabsan. Inkastoo ay Itobiya qarinayso xasuuqa ay ciidamada rasmiga ah ee Itobiya (IDF) iyo dhalinyarada ay maskax rogeen ee Liyu-booliska oo wada socda u gaysteen shacabka Ogadenya, dhanka Ruwanda waxaa lasoo taagay maxkamad loo magacaabay dambiilayaashii gaystay xasuuqaa.
Qaanuunka dawliga ah ee Dambiyada Cidhib-tirka (Genocide Crimes), wuxuu qorayaa inuusan duugoobin oo markasta oo suurtagal ah lagusoo taagi karo maxkamadda ICC eedeysanayaasha galay dambigaa.